Nin carooday laga badi sida Arsenal - BBC News Somali
Nin carooday laga badi sida Arsenal
Image caption Ciyaartoyda Chelsea oo goolka 1aad u dabbaaldegaya
Sabtidan waxaa dhacay toddoba ciyaarood oo ka tirsan horyaalka kubbadda cagta ee Ingiriiska. Waxaana loo kala badiyay:
Chelsea 2 - 0 Arsenal, Aston Villa 0 - 1 West Brom, Bournemouth 2 - 0 Sunderland, Newcastle 1- 2 Watford, Stoke 2 - 2 Leicester, Swansea 0 - 0 Everton, Manchester City 1- 2 West Ham
Toddobaadkan waxaa nefistay Chelsea oo culays badani ka haystay guuldarrooyin isdaba joog ah ee sida xun ee sanadkan ay horyaalka ku bilawday. Labada gool oo ay u kala dhaliyeen ninka difaaca ka ciyaara ee Kurt Zouma iyo Eden Hazard waxay Chelsea u xaqiijisay guushoodii 2aad ee lix ciyaarood oo horyaalka ka tirsan.
Guuldarrada Arsenal waxay bilaabatay markii kooxda laga saaray laacibka difaaca ka dheela ee Gabriel ilbiriqsiyo kahor dhammaadkii qaybta 1aad ee ciyaarta isagoo haraati ku dhuftay weeraryahanka Chelsea Diego Costa kaddib markii uu Costa wejiga farta ka geliyay Laurent Koscielny.
Chelsea waxay ka sii faa'iidaysatay markii garoonka laga saaray laacibka ciyaarta Arsenal ku socotay ee Santi Cazorla oo laba goor loo taagay warqadda huruudda ah markii khalad ku galay Cesc Fabregas oo loo aqoonsaday inuu ahaa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa kulankaas dhexmaray Chelsea iyo Arsenal.
Chelsea wax gool ah lagama dhalin siddeeddii ciyaarood ee ugu dambeeyay ee Premier League ay isaga hor yimaaddaan Arsenal.